မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 423
Yangon Press International www.facebook.com/ygnpress ဓာတ်ပုံသတင်း မတ်လ ၂၂ ၊ ၂၀၁၂ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၎င်းအရွေးချယ်ခံမည့် ကော့မှူးမြို့နယ်သို့ စတုတ္ထအကြိမ် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သွားရောက်ခဲ့သည်။ No tags for this post.
မီဒီယာဆိုတာ လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ လိုတယ်၊ အာမခံတဲ့ဥပဒေမလိုဘူး မောင်ရစ်၊ မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂ မတ်လ ၁၉ ရက်တုန်းက ရန်ကုန်မှာ မီဒီယာဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ညီလာခံကျင်းပတယ်။ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က အမျိုးသားသတင်းဆုပေးပွဲကျင်းပတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေကော၊ မခင်မင် မရင်းနှီးသူတွေကော တက်ရောက်ဆင်နွှဲကြတာကို တွေ့ရတယ်။ အာဏာရှင်တွေ အဆင့်ဆင် ပြဋ္ဌာန်းချုပ်နှောင်ခြင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတဲ့ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာလောကမှာ သူတို့တွေရဲ့ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းတွေ မလိုဘူး၊ သူတို့တတွေရဲ့ ကျောသပ်၊ ရင်သပ် အလုပ်ခံရတာမျိုး မလိုဘူး၊ သူတို့တွေဆီက ဥပဒေတွေနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း အသနားခံစရာ မလိုဘူးလို့ ပြောလိုက်ချင်တာပဲ။ “စာနယ်ဇင်း” ဆိုမှတော့ “မီဒီယာ” ဆိုမှတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ တန်းတူ လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ လိုတယ်။ ပြည်သူတွေကို...
ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့နယ် ၊ ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွာ NLD ရုံးက ပိုစတာတွေ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ညက ဖျက်ဆီးခံရပါတယ်။ NLD ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မန်းဂျော်နီ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ပါတဲ့ ပိုစတာတွေပါ။ No tags for this post.
Burma VJ Media Network ဓာတ်ပုံနှင့် ရုပ်သံ မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၂ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိုင်းမြင့်မောင် No tags for this post.
ငြိမ်းချမ်းအေး မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၂ စိန့်မာတင်ကျွန်း ခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပေးလိုက်ရတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ စိန့်မာတင်ကျွန်း အကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ Tags: ဘင်္ဂလီ, ရခိုင်
Page 423 of 435«1...421422423424425...435»